Gini mere iji nyochaa igwe ojii na ihe ndozi ulo?
Bipụtara: August 14, 2020
Emelitere: June 29, 2022
Uru dị mkpa nke ịnwe ngwaọrụ nlekota ejikọtara maka Igwe ojii na Onsite
Federated Cloud Monitor na Onsite Sistemụ Nchịkwa na Ọrụ
Ihe ntiwapụ nke Covid-19 na ọrụ na-esite na iwu ụlọ emeela ka azụmahịa dị iche iche na-abawanye ụba na ntinye aka na ọrụ akụrụngwa maka 80%. Ijikwa ụlọ ọrụ teknụzụ ụlọ ọrụ anaghị adịrị ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa nọ n'ụgbọ ahụ aka. Site na mbata igwe ojii na akụrụngwa onsite, ọ dị mkpa maka azụmahịa ọ bụla ịkọwapụta otu esi ejikwa njikwa nke teknụzụ ya niile nke ọma.
Ugbu a ụlọ ọrụ achụmnta ego na-eme ngwa ngwa iji nweta teknụzụ ojii, igwe ojii nke nsogbu abịawo:
Igwe igwe ojii na-ewu ewu dị iche iche ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ Usoro onsite onsite nlekota onsite anọwo nwa oge. Ma, ijikota ihe owuwu ulo nke urukpuru na otu ikpo okwu bu nnukwu ihe isi ike nye ulo oru.
Enweghị ohere & Njikwa Arụmụka nke igwe ojii vs. nzuzo na-emecha banye na nsogbu njikwa na nnweta. Otutu ulo ahia enweghi ikike inweta ihe ndi ozo na ihe ndi ozo. Nke a na - emepụta ọpụpụ siri ike n’ịtụle arụmọrụ sistemụ ma ghọta ihe kpatara nsogbu. Na mgbakwunye, ọtụtụ azụmaahịa anaghị enwe ike ịrụ ọrụ ha ọ bụla dịka onye nwe ụlọ na igwe ojii nwere ọtụtụ ndị nwe ụlọ.
Enweghi ike ịkọ ihe ga - eme ka ihe ndị ahụ na - emebi ikuku na - agbada na ngwa ndị ọzọ na akụrụngwa
Ikewapụ a nwere ike ịmepụta enweghị ike na sistemụ nlebara anya. Ihe ndị nwe ụlọ ọrụ ahụ ewepụtara ma rụọ ọrụ mkpa, bụ usoro agbakọtara ọnụ nke nwere ike idozi ọdịiche nke data dị. N'ụzọ bụ isi, otu ikpo okwu kwesịrị ịchọpụta nghọta nke igwe ojii na akụrụngwa nke ụlọ. O kwesiri inyere ndi oru IT aka ya na ndi oru aka inweta ihe nlebara anya, ihe ndi mmadu na ekwu maka imebi uzo, nyocha zuru oke, na akuko banyere akpukpo ahu. Site n'inwe usoro nlekota anya di adi, ulo ahia nwere ike ime ihe omumu di nzi mgbe obula achoputara nsogbu ma obu okwu.
Mgbe ị na-ahọpụta ngwaọrụ nlekota nke netwọọdụ nke nwere ike ijikọ akụkụ abụọ ahụ, jide n'aka na ị nwere ike isi nweta nghọta site na urukpuru igwe ojii na akụrụngwa onsite site na iji usoro iwu dịka SNMP na IP SLA ma ọ bụ usoro ọkọlọtọ ndị ọzọ. Ozugbo ịtọputala ntọala gị, nke a bụ igwe metụta ị ga - elekwasị anya:
Nkesa data gafere na ngwanrọ na ntanetị, tụọ ya na baiti ma ọ bụ nkeji ndị ọzọ.
Itinye CPU nke dabere na oge iji gosi na oge ịgba ụgwọ. Ihe metetara a ga - enyere gị aka idoanya na ituzi akwụmụgwọ na iji ya, ya na ụgwọ kwakọtara na usoro ịgba ụgwọ.
KPIs kwụsiri ike n'ihe ga - eme ka ị mara ma ọ bụrụ na sistemụ, ihe nlere ma ọ bụ sistemụ adaa.
N'ikpeazụ, KPI Nchekwa na-enyere gị aka ịghọta ịdị obosara na ịdị omimi nke data ejiri n'ọrụ oge edere na oge ịgba ụgwọ.
Ihe a na-elekwasị anya abụghị naanị ịnweta ikpo okwu federated nke nwere ike ịdọrọ data sitere na sistemụ dị iche iche nke ndị na-ere dị iche iche jikwaa. Ebumnuche ebe a bụ ịchọta uru na nyocha na njikọta nke data a nke na-eme ka iyi data ọ bụla tụnyere ụdị ọzọ, ọbụlagodi na ha anaghị akọ. Ọ bụrụ na etinyere ya na ikpo okwu kwesịrị ekwesị, nkwupụta ahụ nwere ike ịpụta nsonaazụ pụtara ìhè maka IT Network Manager n'ụdị:
Nleta anya zuru oke nke ihe oru IT dum Nke a ga - enyere gị aka ịma nghọta doro anya nke nnukwu ihe osise. Ike inyochaa nke na-enye gị ohere inyocha ngwa ahịa sitere na igwe ojii yana netwọọdụ gị dị na ya nwere ike igosipụta nkọwapụta, mgbanwe ndị buru ibu na atụmatụ ị kwesịrị ị na-eme atụmatụ.
Single Dashboard maka All Insights Ike nke inwe otu dashboard bụ na ọ na-enye gị ohere inyocha ọbụna ntakịrị ihe dị na sistemụ, Nyochaa nwere ike ịdị irè naanị mgbe ọ dị mma.
Uwe eji agba mkpirisi Na ngwụcha, ihe ndị a niile na - enyere gị aka ịnwe obere oge iji rụkwaa ọrụ ma nyere gị aka ịme ka sistemụ na-arụ ọrụ n'oge. Gbalata n'ime usoro azụmahịa ọ bụla, wepụta nkọwapụta koodu dị oke mkpa iji dozie nsogbu arụmọrụ maka ngwa ojii kesara.
Atụmatụ & amụma kachasị mma -Mee ka otu gị na ihe gị dịkwuo mma karịa inwe otu ìgwè abụọ na ọtụtụ ngwaọrụ. Ọ na - enyere ndị otu IT aka imeziwanye ikike na ịkọ nkọ
N'oge na-adịbeghị anya, onye na-arụ ọrụ mkpanaka guzosiri ike kpebiri ịkwaga ụfọdụ ngwa ya dị oke mkpa na igwe ojii nke nnukwu conglomerate nyere. Mkpebi ahụ nwere echiche gbasara ego, dịka ndị otu IT na-eme mkpesa mgbe niile na ọ na-emefu ọtụtụ akụrụngwa na naanị ijikwa na idozi ọrụ mmechi mgbe ọ bụla wepụtara mmelite ma ọ bụ patch ọhụrụ. N'ihi ya, ndị otu njikwa kpebiri idepụta aha mkpa na ngwa ndị dị oke mkpa wee bido usoro ịkwaga maka ndị ọzọ niile.
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, njikwa ahụ kpebiri nyocha zuru oke ma rụọ ọrụ nyocha-nyocha nke mkpebi ahụ. N'ụzọ tụrụ ya n'anya, ndị otu njikwa matara na ndị otu IT enweghị nke ndapụta ahụike na ngwa nke ngwa ojii. Onye isi IT ahụ kwupụtara na Cloud API dị mma iji nye mkpesa banyere igwe ojii na ngwa ya. Agbanyeghị, ndị otu a nwekwara ọrụ maka ịtụle usoro dị mkpa maka onsite, ọ na-abụkwa ihe siri ike ileba anya na usoro abụọ ndị ọzọ na-agbasaghị.
Ndị otu njikwa chọrọ data zuru oke site n'akụkụ abụọ ahụ n'ụzọ ziri ezi. N'ihi ya, o kpebiri ijikọ usoro netwọrụ nwere njikọ nke nwere ike ịtụle data sitere na igwe ojii na akụrụngwa onsite ma nyere ndị otu IT aka inweta data nke yie. Otu a nwere ike ijikwa, welie ma dozie nsogbu dị na akụrụngwa igwe ojii ọ bụla ruo na njedebe nke onye ọrụ iji nweta ọhụụ na-enweghị atụ.
Usoro ejikọtara ọnụ nke nwere ike ịkọ ihe site na igwe ojii na ihe ndị dị na akụrụngwa nke ebe data nwere ike bụrụ uru maka ụlọ ọrụ ọ bụla ya na ndị na-ere ahịa dị iche iche nọ. Na mkpokọta, ịnwe ọtụtụ dashboards nke na-akọ naanị data sitere n'otu ebe nwere ike ịmepụta enweghị ike na nlekota. Usoro jikọtara ọnụ kwesịrị iwere data ziri ezi site na ụzọ ziri ezi ma weta ya niile nghọta nghọta, nke e gosipụtara n'ọnọdụ ziri ezi, yana ikpuchi KPI ụlọ ọrụ.
Motadata bụ igwe eji arụ ọrụ mebere nke na-enyocha, na-enyocha ma na-ejikwa azụmaahịa-dị mkpa na ọrụ prem na igwe ojii (ọha na eze) dabere na ngwa, ngwa na akụrụngwa sitere na Single UI. Ihe nleba anya igwe ojii nke Motadata na-enye nkọwa zuru oke nke ahụike gburugburu igwe ojii gị gụnyere ọnụ, ndị ọrụ na azụmahịa niile sitere na otu dashboard. Iji mara ka anyị ga-esi nyere gị aka degara anyị akwụkwọ sales@motadata.com